Gawaarida Guriga ee Soonka | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB33 FaransiiskaGawaarida Guriga ee Soonka (Soonka)
09 / 01 / 2020 33 Faransiiska, YURUB, DUNIDA, GUUD, WADADA, Headline, baabuurta
cakma gawaarida guryaha iibka ah
Gawaarida guryaha, goobta labaad ee wax iibsiga ee Faransiiska oo leh xayeysiis been abuur ah 'oo iib ah'. Iibiyaha ayaa doonaya 30 kun euro oo loogu talagalay gaariga (qiyaastii 200 kun TL). Iibiyaha ayaa sheeganaya in gaarigiisa 12 kun oo kiiloomitir wadada!
Sida lagu sheegay warbixinta Euronews'de Gizem Sade; bilaabi doonaa wax soo saarka mass ee 2022. baabuurta gudaha Turkey ugu horeysay ee korontada, France ee ugu weyn, oo gacan labaad-madal shopping la been abuur ah si ay u leboncoin ah "tegey on sale."
Adeegsi qarsoodi ah oo ka shaqeeya Leboncoin ayaa dhowaan ku dhawaaqay iibinta gaariga maxalliga ah, oo uu soo bandhigay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Moodaraalka nooca TOGG ee korantada nooca 2020 ah oo sheeganaya inuu sameeyo wadada 12 kun oo kiiloomitir, isticmaaley ayaa xayeysiinta ka wadayay akoon qarsoon.
TAARIIKHDA 5 JANUARY
Sawirada gawaarida hoyga ee isticmaale ee wadaaga xayeysiinta been abuurka ah wali lagama soo saarin goobta. Ku dhawaaqidii ku taariikhaysan 5-ta Janaayo, qiimaha gaariga waxaa la siiyay 30 kun oo Yuuro.
Turkey ayaa Initiative Group (TOGG) Baabuurta, bilaabi doonaa wax soo saarka ee gaari gudaha 2022. Turkey ee la soo bandhigay on December 27 xaflad lagu qabtay Gebze. Faahfaahinta soosaarka baabuurta korantada ee gudaha waxaa lagu dhawaaqay go'aanka Madaxweynaha oo lagu daabacay Jariidada Rasmiga ah isla maalintaas.
IZBAN Shaqaale Wicidan ayaa lagu soo wargeliyay Yildirim iyo Kocaoglu
Geedi socodka wadista baabuurka ayaa ka bilaabmay guusha Golden Horn Transition
Gawaarida Gaadiidka ee Halic Gaadiidka Isgoyska Hoose
Iskuduwaha ayaa u qeexay gawaarida maxalliga ah ... Yaa ku jira guddiga?
Gawaarida Wadada Gaadiidka
Shirkadaha IDO waa Online
Mudada biraha gudaha ah waxay ka bilaabataa taayirrada baabuurta
Gaariga gudaha ee ugu horreeya wuxuu soo bandhigay xiiso weyn (Sawir Sawir)
waxaa gaariga ugu horeysay Turkey ee gudaha ka dhacay on taraamka (Video)
Vardar, Mid ka mid ah injineerada Kacaanka Qaran ee ugu horeeya, Dies
Farxad Ku Socota Wakiilka Ugu Dambeeyay ee Dib-u-kicinta Guriga Koowaad ee Gudaha
korontada baabuur wadaniga ugu horeysay ee Turkey